Nhau - Maitiro ekuita kuti imbwa dzifare？
Anti Parasitic Mishonga
Maitiro ekuita kuti imbwa dzifare？
1, Chinhu chinonyanya kufadza pamusoro pembwa
Imbwa dzinoda kurovedza muviri kupfuura vanhu kuti vawane hutano, kufara uye kusunungura kusagadzikana. Usati waita maekisesaizi, unofanirwa kuyeuchidzwa kuti kudya imbwa usati wanyanyisa kurovedza muviri kuri nyore kukonzera kurutsa, saka usadzidyisa usati wasimbisa muviri; Kana zviri mushure mekudya kwemanheru, usaregedze cheni uye umhanye nesimba, zvikasadaro zviri nyore kuva nezvirwere zvakakomba.
2, Yevanhu & imbwa kumhanya
Kumhanya: Iyi ndiyo nzira inowanzo shandiswa yemafitness yekurera imbwa mumaguta. Zvinonzi varidzi vembwa vane hutano hwakanaka uye vane zvirwere zvishoma. Imwe yakakosha poindi ndeyekuti isu tinomhanya uye tinorovedza nembwa. Mhando dzakasiyana dzembwa dzine kumhanya kwakasiyana kumhanya uye kutsungirira, uye kutsungirira kwemunhu wese uye simba remuviri zvakasiyana zvakare. Naizvozvo, kana iwe uchimhanya nembwa, iwe unofanirwa kusarudza yakanaka inoenderana kumhanya. Semuenzaniso, imbwa huru dzinomhanya dzakadai seLabrador nebvudzi regoridhe dzakakodzera kwazvo kuti varume vamhanye; Vafudzi vemuganhu avo vakanyanya kugona kumhanya vanofanirwa kuve nehunyanzvi shamwari yekutevera; Vakadzi vanokodzera kumhanya zvishoma nembwa dzakadai seVIP nemapere, izvo zvisiri nyore kukuvara.
Imbwa inoperekedza kudzidziswa
Pamusoro pembwa dzakakodzera dzekumhanya pamwechete, kunzwisisana pakati pevanhu nembwa kwakakoshawo. Pakutanga, muridzi wechipfuwo anoda kudhonza tambo kudzora kumhanya kwembwa kuti isaputika (ona chinongedzo chiri pamusoro pakudzidziswa ichifambidzana), kuti igone kujairira kumhanya kwemuridzi wechipfuwo nekumhanyisa uye kuchengetedza kusagadzikana, uye wobva wafunga tambo yekusunga iyo inogona kutenderera madhigirii mazana matatu nemakumi matatu zvakasununguka zvakasungirirwa muchiuno.
Kutora imbwa kunze kwekumhanya ndiyo zvakare nzira yakanakisa yekurega imbwa inwe mvura. Shamwari zhinji dzine imbwa diki dzakandibvunza kuti ndingaite sei kuti imbwa inwe mvura yakawanda. Mhinduro ndeyekutora bhodhoro remvura neni kana muchienda kunofamba uye kumhanya nekupa iyo imbwa imwe yega gumi nemashanu maminetsi. Kumhanya kuchaipisa. Inoda mvura yakawanda kuti ibvise kupisa, saka inonwa mvura kazhinji. Nguva yekumhanya inosiyana zvichienderana nekugona kwemunhu. Kazhinji kutaura, unogona kuzorora kwemaminetsi gumi nemashanu mushure mekumhanya kwemaminitsi makumi matatu kuti usapisa kupisa, kupisa kana kukuvara. Kana iwe ukaona kuti imbwa haidi kuenderera ichimhanya, unofanirwa kumira uye uone kana paine kukuvara kana kusagadzikana.
3, Kushambira uye musango
Kushambira: kushambira kungave iko kwakanyanya kurovedza muviri, kwete kwedu chete, asiwo imbwa. Dzivisa kumanikidzwa kwembwa uremu pamakumbo, kunyanya kana imbwa dzakafutisa dzichirovedza zvakanyanya, dzinonetseka nezvekukuvara kwemajoini, uku kushambira mumvura isina kunetseka kwakadaro. Munguva yekudzoreredza imbwa dzine chirwere chakabatana kana mushure mekuvhiyiwa, isu tinopa zano mhuka dzinovaraidza kuti dzishambire zvakanyanya. Iyo buoyancy yemvura inoderedza zvakanyanya kumanikidza kwemajoini uye kurovedza mhasuru panguva imwe chete. Imbwa hadzina kuberekwa kushambira. Vanodzidza kushambira zuva rinotevera mangwana. Nekudaro, nekuti chimiro chembwa yekushambira chakafanana neicho chekumhanya, chero imbwa ikakunda kutya kwayo, inogona kudzidza kushambira mumaminetsi mashoma.
Kekutanga iwe paunopinda mumvura, haufanire kupa imbwa iri yega mumvura. Izvi zvinotungamira nyore imbwa kudzipwa. Zvakanakisa kuti muridzi wechipfuwo amire mumvura nembwa mumaoko ake. Chekutanga pane zvese, ive shuwa yekusunga iyo kora uye traction tambo. Muridzi wechipfuwo anomira padivi uye anodhonzera imbwa kumberi munzira yakatarwa. Chero bedzi nhungamiro yacho yagadziriswa, muviri wembwa unozoshanduka kubva pakamira kuenda pane yakatwasuka inoyerera mumvura panguva yekufamba. Izvo zvinowanzo shambira pamwe nekutsvedza kwetsoka dzayo. Chero bedzi ichinge yashambira kanoverengeka, inozokunda kutya kwayo uye ive inofarira mvura.
Kunyangwe iwe uchishambira mudziva, rwizi kana gungwa, unofanirwa kuchengetedza mvura ichiyerera kudzivirira chirwere chembwa chinokonzerwa nehutachiona hwakawanda mumvura yakafa. Mushure mekushambira, unogona kushambidza imbwa ganda uye vhudzi nemvura yakachena, uye kudonha anti-kupisa maziso anodonha 1-2 nguva kudzivirira hutachiona hwemaziso.
Nzvimbo iyo imbwa dzinonyanya kuve nemuchetura
Kukwira Hiking: Iyi ndeimwe yeinodiwa nembwa, asi iri pasi pebasa revaridzi vezvipfuyo, saka kazhinji inongowanikwa mukupera kwesvondo. Nzvimbo dzemakomo mumahombekombe eguta, mahombekombe egungwa uye nzvimbo ine huswa ine vanhu vashoma inzvimbo dzakanaka dzekuenda. Ehezve, munzvimbo dzine vanhu vazhinji, iwe unofanirwa kusunga tambo yekusungira kana kuisa pamuromo. Mira kusvikira pasina munhu, uyezve edza kuiregedza uye iite kuti ifambe zvakasununguka. Ndino shanje avo varidzi vezvipfuyo vanogara munzvimbo dzine makomo nemvura. Vanogona kutora imbwa dzavo kunotamba kana vakasununguka. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuchave nezvikwekwe zvakawanda mumakomo, saka isu tinofanirwa kuita in vitro inodzinga zvipembenene nenguva, uye nekuona mhedzisiro yezvipembenene zvinodzinga uye zvinopesana nezvikwekwe; Uye zvakare, tora mvura yekunwa yakakwana kuti urege kunwa mvura yakasviba kunze; Chekupedzisira, kwakawanda kukwikwidza kunotora nguva yakareba uye mugwagwa hausi iwo hwaro hwakatsetseka mukati meguta, saka imbwa dzinogona kusakadza padhi renyama. Chinhu chekutanga chekuita mushure mekuenda kumba kutarisa kana pombi yenyama yakanganisika. Kana wakuvara, suka ronda ipapo uye rapa ronda racho neIodophor + anti-inflammatory mafuta.
Nebasa riri kuwedzera kubatikana revaridzi vezvipfuyo, kuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu uye kushomeka kwezivo yehutano hwechipfuwo, huwandu hwembwa dzakafutisa huri kuwedzera. Usamirira imbwa kuti dzive nezvirwere zvepanyama kana kushushikana nekuda kwekunyanyisa kwepfungwa usati watanga kurovedza muviri. Kurovedza muviri zvine mwero zuva rega rega ndiyo sarudzo yakanakisa kune imbwa uye varidzi.
Post nguva: Sep-03-2021
Hebei Weierli Mhuka Chemishonga Boka Co, Ltd.